အားကြီးသောယာဉ်များ၏ဂိမ်း / app / web / IoT ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - IoT ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးလျှင်ဂိမ်းများ, apps များ, Web စနစ်, ငါ့ကိုရန်သူကစွန့်ခွာ!
WEB စနစ်က / app / IoT အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
VR မိတ်ဆက်စကားထောက်ခံမှုနဲ့ content ဖန်ဆင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု
Facebook မှာ (တရားဝင်ရုံးသုံး)
ဒါဟာ [သတင်းထုတ်ပြန်ချက်] စူပါအစစ်အမှန် mahjong P8 ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်
သြဂုတ်လ 22, 2018
ဇူလိုင်လ 22, 2018
ဇူလိုင်လ 10, 2018
TLS1.2 အဆိုပါကိုက်ညီတဲ့ပါဘူးသောငွေပေးချေမှု server ကိုချိတ်ဆက်ရန်ထောက်ခံမှုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်
မေလ 30, 2018
Shoryu Shogi အွန်လိုင်း (အနာဂတ်ဖုန်းကိုထောက်ခံမှု) ဝန်ဆောင်မှုရပ်စဲဖြစ်ပါတယ်
ဧပြီလ 1, 2018
console ကိုဂိမ်းသည်အထိစမတ်ဖုန်း app ကို (iPhone / Android မှာ) နှင့်လူမှုရေးဂိမ်းဆာဗာအခြေခံအဆောက်အဦကနေ။ စီမံကိန်း, လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးရေး, အဖြစ်အပျက်စစ်ဆင်ရေးအပါအဝင်တသမတ်တည်းကစွန့်ခွာပါ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းမူဘောင်အတွင်းထို program ၏တည်ငြိမ်အရည်အသွေးကိုပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရေခြားမြေခြားလေကြောင်းလိုင်း၏ terminal ကိုမှဂိမ်းပေးထားပါတယ်။ လည်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မိုဘိုင်း & Web ကိုဖြေရှင်းချက်
အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည်အထိ - ဒီဇိုင်း - ထုတ်လုပ်မှု - Operations - ။ update ကိုတစ်နေရာတည်းမှာန်ဆောင်မှုများ၏ကမ်းလှမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုအားလုံးစောစော In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်လုပ်မှုအသုံးပြုပုံပင်မိုဃ်းတိမ် server ကိုမှသက်ဆိုင်ရာ site ၏တိုးတက်မှုနှင့်အညီထုတ်လုပ်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းတုံ့ပြန်မည်။ စမတ်ဖုန်း site ကိုနဲ့ HTML apps များထဲကအတော်များများ, SNS ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး, PC ကို site ကိုဆောက်လုပ်ရေး, မိုဃ်းတိမ်ကိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတွင် track record ရှိသေး၏။ Load အစီအမံများနှင့်ဒုက္ခစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော server ကိုလွှဲပြောင်းတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အဖြစ်အားလုံးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်!
VR SERVICE ကို
VR အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, ငါတို့ထိုကဲ့သို့သော VR ဖျော်ဖြေရေးစနစ်၏နိဒါန်းအဖြစ်အဆိုပြုချက်စေမည်။
လူမှုရေးဂိမ်းများကိုအထူးပြုကြောင်း MightyCraft, ပေါ့ပေါ့ app ကို မှစ. , နည်းပညာသရုပ်ပြ app ကိုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်သည်ထင်ရှား! ပုံစံပင်သေးငယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေလျှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစကားပြောခန်း! ယုံကြည်ချက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ "MightyCraft" ၏အရပျ၏တူးဖော်အဖြစ်ကျနော်တို့အနာဂတ်အတွက် "ဇီးကွက်စတူဒီယို" မှဖြန့်ဝေမိန့်မည်!
ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအလုပ်အချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ App ကို WEB စနစ်က 50 ကျော်ဆိုဒ်များတစ်သက်သေတွင် track record ရှိပါတယ်, 400 ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ကူသော Shogi အွန်လိုင်း
နဂါး Rider သို့ပြန်သွားရန်ကိုရို
စာကြည့်တိုက် VR Escape
SNS Update ကို
webhook အတွက် php - Chatwork အတွက် bot (1) Make
/ PHP ကို ​​preset လျှင် API ကို Chatwork မှ webhook အတွက် webhook အတွက်လှေတျတျောမူသောဒေတာများ / webhook သုံးစွဲဖို့နိုင်ခဲ့သည် Make bot တစ်ကောင်အတွက်တတ်နိုင်သမျှ / webhook တစ် Chatwork ကိုအသုံးပြုသည်[ ... ]
FLET တစ်စက်နှင့်ဆပ်ပိုရိုထဲမှာ DS-Lite ကို (IPv6 သ IPoE) ချိတ်ဆက်မှုမြန်နှုန်း
NTT ၏ optical fiber ကိုလိုင်း၏မြန်နှုန်းလျှော့ချရေး၏ FLET ဆပ်ပိုရိုရုံးခန်းထဲမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ FLET ၏ကြင်နာ 100Mbps အမျိုးအစားတစ်ခုကွန်ဒိုမီနီယံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်းကပြဿနာအများကြီးဖြစ်လာပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါနောက်ပိုင်းမှာညဦးယံအချိန်နေ့ရက်ကာလ၌အရှိန်လျှော့ချရေးခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်[ ... ]
Linux ကို၏ Pateshon (command line က) အရွယ်အစားပြောင်းပါ
မကြာသေးမီကမီဒီယာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်, စျေးနှုန်းလျှော့ချရေးတိုးတက်မယ့်အစားဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်၏သိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်မီဒီယာ၏ server မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်နိုင်စွမ်းအတွက်စျေးနှုန်းတစ်ခုအစိတ်အပိုင်းမှဖြစ်လာသည်။ ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည် drives တွေကိုရန် Linux ကို disk ကိုမြေတပြင်လုံးကိုကော်ပီကူးဖို့ဒီအချိန်,[ ... ]
WindowsXP မှ Re-install ပု Cygwin ဆိုသည်သိပ်နောက်ကျ
ရွေးနုတ်ဖိုးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ကပ်ရောဂါကဘာလဲဆိုတာ Cry (ransomware) ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ Windows XP ကိုကတက်ကြွစွာကြောင်းနေဆဲကြောင်းထိတွေ့ခဲ့သည်။ Microsoft ကလည်း patch ကိုထုတ်ပေးပေမယ့်အထဲကထောက်ခံသင့်ကြောင်းအခြေချ။ အကြှနျုပျ၏, ဟုတ်ကဲ့[ ... ]
Hikari Denwa ၏ SIP client ကိုရန် Yamaha NVR500 ချိတ်ဆက်ပါ
တိုကျိုဌာနချုပ်၏ N ကဖြစ်ပါတယ်။ Hikari Denwa Router က "PR စနစ်-S300NE" ၏တစ်ဦး SIP client ကဲ့သို့ငါ Router က "NVR500" ၏ Yamaha ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ကျော NTT တို့က installed ထားပြီးဖြစ်သော Hikari Denwa Router က, ၏ "PR စနစ်-S300NE" ဖြစ်ပါတယ်။ လက်[ ... ]
စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူခြေရာခံ VR အနေအထား
ဆပ်ပိုရို Z. ၏ရုံးဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ In-အိမ်သူအိမ်သားသုတေသန၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် smart ဖုန်း Device များအတွက်ခြေရာခံတစ်ဦးအနေအထားအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ကျင့်ချင်, အ mode ကို screen ၏ VR (virtual reality) တွင်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းလျှောက်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အနေအထား detect ဆက်စပ်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းစမတ်ဖုန်းများတွင်[ ... ]
Windows10 non-သဟဇာတမော်ဒယ်များ upgrade
တိုကျိုဌာနချုပ်၏ N ကဖြစ်ပါတယ်။ Windows10 မှအခမဲ့အဆင့်မြှင့်ကာလအထိ 7/29 ၏ဖြစ်ပါသည်, In-အိမ်သူအိမ်သားနောက်ဆုံးမိနစ်အဆင့်မြှင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းဆင့်ကဲစက်၏ non-အသုံးပြုမှုမှ Windows10 ထား. , Windows10 Non-compliant ဖြစ်ပါသည်[ ... ]
FuelPHP အတွက် DB အလျားလိုက်ဌာနခွဲစာပေးစာယူ
ဆပ်ပိုရိုရုံး၏ငွေကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ, ဆာဗာစနစ် (LAMP ပတ်ဝန်းကျင်) ၏ထုတ်လုပ်မှုမကြာမီ Open-source ကိုမူဘောင်၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ထားပြီး, In-အိမ်သူအိမ်သားမူဘောင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ဗဟိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအိမျမူဘောင်မဆိုးပေမဲ့[ ... ]
ဒါဟာစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး WebGL ကိုအတွက်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိမဖွစျနိုငျ
ဒါဟာတိုကျိုခေါင်းကိုရုံး၏, G ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးမှသည် WebGL ကိုမှကိုက်ညီပေမယ့်လျောက်ပတ်သောအချိန်ကတည်းကလွန်ပြီ, ဒါပေမယ့်အချက်အလက်များ၏ဂျပန်အတော်လေးသေးငယ်သည်နှင့်တူယနေ့ခေတ်ငါခံစားမိ WebGL ကိုအကြောင်းပါ။ ဒီနေ့ငါသှားအကွာအဝေး, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး WebG အတွက်ဖြစ်သော်လည်း[ ... ]
ဓာတ်ပုံများ 123D ဖမ်းရာမှမော်ဒယ်များ Create နှင့်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို 3D ထဲမှာပေါ်လာ
ဒါဟာအိုဆပ်ပိုရိုရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငါ AutoDesk 123D Catch သုံးပြီး 3D model ကိုဖန်တီးရန်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက်ရွေ့လျားမှု၏ display ကိုမှီတိုငျအောငျလုပျဆောငျဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကနေ 3D မော်ဒယ်များ၏ဒေတာကိုဖနျတီးနိုငျသော 123D Catch, Apu,[ ... ]
Toshima-ku, တိုကျို Minamiikebukuro 2-8-5 MI အဆောက်အဦ 3F
ဆပ်ပိုရို, ဟော့ကိုင်းဒိုး, Kita-ku, Kita9Jo Nishi 4-chome, 10-3 Galleria 2F
မူပိုင်ခွင့် (ဂ) 2018 တန်ခိုးကြီးသောယာဉ် Co. ,